Ikilasi elingenhla - Cygnet Retreat - I-Airbnb
Ikilasi elingenhla - Cygnet Retreat
Cygnet, Tasmania, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Birte & Brad
U-Birte & Brad Ungumbungazi ovelele
I-Cygnet Retreat iyindlu yokulala eyakhiwe ngokwezakhiwo ezintathu, izindlu zokugezela ezi-2 zamaholide ekhaya enhliziyweni yeCygnet eningizimu yeTasmania. Kuyindlela ekahle yokubalekela izithandani noma amaqembu nemindeni efuna ukuhlola i-Cygnet nobuhle bayo obuzungezile.
I-Cygnet Retreat iqhele ngamaminithi ambalwa ukusuka emgwaqweni omkhulu we-Cygnet, owaziwa kakhulu ngokudla okumnandi, ubuciko, umculo kanye nokuhamba ngezikebhe. Uma ufisa ukuhlola indawo ekude, khona-ke futhi itholakala enkabeni yezindawo zokuheha amadrayivu amafushane noma okuhlangenwe nakho kosuku olugcwele.
I-Cygnet Retreat ihlanganisa zonke izinsiza zesimanje ozidingayo ukuze uhlale unethezekile endaweni enhle yase-Huon Valley yaseTasmania, okuhlanganisa namagumbi okulala amathathu amakhulu namagumbi okugeza amabili anebhavu lokugeza, indawo enkulu yokuhlala ngaphakathi nangaphandle yokuzijabulisa, igceke elingemuva eline-spa yosuku yangasese. kanye nedekhi kanye nazo zonke izinhlinzeko ezidingekayo ekuhambeni kwakho okulandelayo!
Ingaphakathi le-Cygnet Retreat lihlanganisa ifenisha eminingi yase-Tasmanian neyase-Australia, izingubo zokulala nemikhiqizo. Indlu inemibhede emithathu elingana neKing, emibili yayo ingahlukaniswa ibe ngama singles amakhulu.
Ngesikhathi esifanayo nokunikeza izivakashi zethu okuhlangenwe nakho okunethezeka nokunethezeka, siyaqaphela ukuba nomthelela omncane endaweni ezungezile. Indlu ifakwe isistimu yelanga engu-5K kanye nomklamo welanga ongenzi lutho. Izinhlinzeko nemikhiqizo yasendlini yokugezela ifunwa endaweni futhi iphinde igcwaliswe njengoba kudingeka ukuze kuncishiswe imfucuza. Lokhu kusivumela ukuthi sethule izivakashi zethu emikhiqizweni emihle necabangelayo ebhekelele imvelo.
5.0 · 81 okushiwo abanye
I-Cygnet iwuhambo lwemizuzu engama-45 (55km) ukusuka eHobart futhi iphakathi kwesiteshi esihle i-D'Entrecasteaux Channel ngakolunye uhlangothi kanye nomfula omkhulu i-Huon ngakolunye. Idolobhana liyisikhungo sezithelo zaseHuon Valley lapho ama-apula, ama-cherry namajikijolo alandelana khona amagquma.
Idume phakathi kwama-foodies, abaculi, abaculi nalabo abafuna enye indlela yokuphila, i-Cygnet inamakhefi amaningana, izindawo zokudlela, izitolo zobuciko nezobuciko kanye namagalari. Iphinde ibe nezindawo zokucima ukoma ezimbili, isitolo sokudla kwezempilo, izitolo ezinkulu ezimbili, isitolo sezithelo nemifino, ibhange, iposi kanye nomthengisi wezindaba. Kunemakethe enkulu yokukhulisa umphakathi kuleli dolobhana ebanjwa ngeSonto lokuqala nelesithathu enyangeni.
Ibungazwe ngu-Birte & Brad
Ababungazi bakho bazophendula ama-imeyili nemibuzo ngokushesha. Sihlala futhi endaweni futhi, ngenkathi siqinisekisa ubumfihlo bakho ngesikhathi sokuhlala kwakho, sizotholakala ukuze siphendule imibuzo nezimo eziphuthumayo ngokushesha.
UBirte & Brad Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Cygnet namaphethelo